Kuwa kale - Noti Caballos | Fardaha Noti (Bogga 2)
Faraska Trakehner waa isku mid isku mid ah, oo ku caan baxay fardaha oo asalkiisu ka soo bilaabmay qarnigii XNUMXaad.
Tartanka fardaha ee England ayaa dhaqan u ahaa qarniyo badan, sidaa darteed qarnigii XNUMX-aad waxaa la go’aamiyay in la abuuro nooc caan ku ah: Faraska Thoroughbred.
Akhal-Teke, jawharaddii Turkmenistan
Akhal-Teke, waxay u taagan yihiin dhalaalka macdanta ee dhogorta, taas oo ah sababta loogu tiriyo tartanka adduunka ugu quruxda badan, sidoo kale waxay ka mid yihiin kuwa ugu da'da weyn.
Faraska Berber, astaamaha mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn
Faraska Berber waxaa loo yaqaan faraska lamadegaanka waana mid ka mid ah kuwa ugu faca weyn adduunka. Waxaa ku soo barbaaray Berber-ka Maghreb.
Fardaha Hanoverian, astaamahooda awgood, waa mid ka mid ah noocyada ugu qiimaha badan ee isboortiga loo yaqaan 'equine sport', waxay ku soo baxaan labbiska waxayna muujinayaan boodbood
Fardaha Arden waa nooc asal ahaan ka soo jeeda Ardennes, Belgium, Luxembourg iyo France. Waxaan dib u eegeynaa astaamaha ugu muhiimsan ee tarankaan.
Fardaha Appaloosa waa midka ay Nez Perce Indians ka heleen iyagoo ka gudbaya fardaha leh astaamo gaar ah sida jaakadooda dhiiga badan leh.
Gawaarida farduhu waa gawaari ka sameysan sanduuq weyn oo yeelan kara qaabab kala duwan oo ku yaal laba ama afarta taayir.
Buugaagta fardaha uu ninku ka qoray way badan yihiin, buugaag buugaag ah iyo buugaag tababar ama daryeel, iyo waliba sheekooyin kuwa yaryar.
Faraska Lusitano waa mid ka mid ah Thoroughbreds-kii ugu da'da weynaa Jasiiradda Iberian waana mid ka mid ah fardaha ugu da'da weyn adduunka.
Faraska cawl wuxuu leeyahay jaakad aad loo qiimeeyo. Koodhku wuxuu ka bilaabmaa mugdi foolalka wuxuuna ku fududaadaa hannaanka qoyaanka.
Faraska Criollo waa astaamo Mareykan ah oo caan ku ah Koorta Koofureed, oo loo qaybiyo qaaradda oo dhan loona horumariyo si ka duwan waddan kasta.
Fardaha gumeystayaashii Isbaanishka iyo kuwa dalalka kale sida Ingiriiska ama Faransiiska ayaa asal u ah asalka fardaha Mareykanka.
Faraska Quarter, ama Quarter horse, waa nooc asal ah oo ka yimid Mareykanka gaar ahaan ku habboon tartamada gaagaaban.
Faraska Mustang wuxuu ka mid yahay fardaha duurjoogta ah ee Waqooyiga Ameerika, laakiin ... ma ogtahay inay ka farcameen fardaha Isbaanishka?
Xayawaankani waa kuwo qurux badan oo gaar ah, in kasta oo noocyada qaarkood ay ka duwan yihiin kuwa kale kuwii hore. Waxaan arki doonnaa fardaha adduunka ugu quruxda badan.
Faraska Zaino wuxuu ku jiraa noocyo kala duwan oo sinnaan ah oo leh farqiga u dhexeeya ee jir ahaaneed wuxuuna leeyahay astaamo kala duwan.
Haddii aad rabto inaad waqti madadaalo leh hesho, soo gal oo waxaan kuu sheegi doonaa kuwa ugu fiican ciyaaraha faraska 3D, khadka tooska ah iyo kombuyuutarka labadaba.
Gali oo soo hel dariiqyada ugu fiican ee fuusha fardaha Isbaanishka ee hadda jira, kuna raaxee waqtigaaga firaaqada qaab gaar ah.
Faraskii Attila muxuu ahaa?
Waxaan kuu sheegeynaa sheekada Faraska Attila, xayawaan caan ku noqon lahaa sida kan fuushan, hogaamiyihii ugu dambeeyay uguna fiicnaa Huns. Waxaan kuu sheegeynaa magaciisu wuxuu ahaa iyo inbadan oo ku saabsan faraskan caanka ah.
Ma rabtaa inaad iibsato faras? Waxaan kuu sheegaynaa inta ay le’eg tahay kharashka ku baxa ilaalinta faraska iyo kharashaadka aad bil kasta ku bixin doonto daryeelka iyo dayactirka xayawaanka. Ma qiimo jaban baa mise waa qaali inaad yeelato faras? Halkan ka baro.
Waxaan kuu sheegeynaa sida farduhu u seexdaan. Ma seexdaan iyagoo taagan ama jiifa? Immisa saacadood oo hurdo ah ayey u baahan yihiin? Ma leedahay riyooyin? Raadi jawaabta su'aalahan oo dhan oo ku saabsan sida farduhu u seexdaan halkan.
Immisa kiilomitir maalintii ayaan ku raaci karnaa faras? Immisa ayuu farasku ordaa? Waxaan isku dayeynaa inaan nadiifino shakigan. Waxaa laga yaabaa inaad u qaadatid sidii gaadiid cusub.
Ma taqaanaa taariikhda Bucephalus? Waxay ahayd faraskii Alexander the Great iyo kan ugu caansan taariikhda hore. Gali oo soo hel cida xayawaankani ahaa.
Faraska albino waa xayawaan aad u fadli badan oo leh dabeecad deggan oo dulqaad leh. Waa wehel ku habboon qoysaska oo dhan. Miyaad ku dhiirrataa inaad soo ogaato?
Waa maxay macnaha ku riyoodka fardo? Haddii isbarbar yaacyadu inta badan ku weheliyaan adiga oo hurdaya, soo gal waanan kuu sheegi doonaa sababta
Howrse, kor u qaad oo tababar faraskaaga
Ma jeclaan lahayd inaad kor u qaaddo oo aad tababarto faraskaaga? Hadda waxaad ku sameyn kartaa Howrse, ciyaar khadka tooska ah ah oo aad wax badan uga baran karto xayawaankan.
Bogagga midabaynta fardaha
Ma u baahan tahay sawirro faras si aad midab u yeelatid? Ma rabtaa inaad sawir aad u gaar ah siiso qof aad jeceshahay? Hadday sidaas tahay, ha ka waaban inaad gasho. :)
Sida loo sawiro faras
Waxaan u sharaxeynaa talaabo talaabo ah sida loo sawiro faras, labadaba si fudud oo xoogaa ka dhib yar laakiin macquul ah. Soo Galaya
Waxaan dhammaantiin kuu sheegeynaa xeebta badda: sida ay yihiin, halka ay ku nool yihiin iyo astaamaha ugu waaweyn ee qaar ka mid ah noocyadooda.
Bandhiga Faraska waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu muhiimsan dhamaan taageerayaasha xayawaankan. Laakiin miyaad ogtahay sida loo xuso? Maya? Galaya! ;)
Waxaan kuu sheegi doonnaa sheekada Rocinante, faraska Don Quixote, nin jilicsan oo isagu is aaminay halgamaa doonaya inuu caawiyo masaakiinta kuna guuleysto jacaylkiisa.
Faraska ugu weyn adduunka
Waxaan kuu sheegeynaa sheekada Poe, Clydestale oo loo yaqaan faraska ugu weyn adduunka oo aan ka tagin cidna.
Xanrunta ayaa had iyo jeer ahayd mid aad loo qiimeeyo oo muhiim u ah bini-aadamka iska caabintiisa iyo xooggiisa, inkasta oo uu yahay faras culus.
Waa maxay equine
Equine waa naasley kasta oo ka tirsan qoyska perissodactyla. Taasi waa, xayawaankaas oo leh hoolal halkii ay faro ku lahaayeen.
Haflinger wuxuu caan ku yahay ama sidoo kale loo yaqaan 'Aveliñés Pony' oo ka soo jeeda Carabta iyo Tyrolean. In kasta oo asalkiisu ka yimid Austria, oo ka yimid buuraha Tyrol.
Halkudhigga tartanka carabta saafiga ahi waa: 'Carab-hibo badan leh'. Hal ku dhiggan, ugu yaraan toban nooc oo faras casri ah ayaa lagu dari karaa.
Faraska Falabella maaha faras, inkasta oo ay sidaa tahay. Tani waa faras yar oo caan ah oo that
Faraska Holsteiner wuxuu u dhashay Schleswig-Holstein waqooyiga Jarmalka. Waxaa loo arkaa mid ka mid ah noocyada ugu da'da weyn dhiig dhexdhexaad ah.
Faraska Carabta waa midka ugu da'da weyn uguna daahirsan oo ay diiwaanno ka jiraan. Sidaa darteed, waa tartan curad ah.
Faraska loo yaqaan Tinker, waa nooc faras xoog leh oo doqon ah oo sidoo kale gadaashooda ku leh taariikh kala duwan sida jaakadooda.
Faraska Carabta oo ka mid ah noocyada qadiimiga ah ee ugu caansan
Faraska Carabta waa midka ugu da'da weyn daahirka, wuxuu ka qayb qaatay qaabeynta taariikhda xadka, iyo sidoo kale qaab nololeedka.
Nooca Barbary, fardaha lamadegaanka
The Berber breed waxaa loo yaqaanaa faraska lamadegaanka, maxaa yeelay, waagii hore, waxay ku qasbanaadeen inay safraan masaafo dheer oo ay ku baraarujinayaan kuleylka iyo soonka.
Abuuritaanka tartanka Aztec
Abuuritaanka tartanka Aztec wuxuu ka bilaabmay 1969 dugsiga sare ee reer Mexico ee fardooleydii Texcoco. Noocani wuxuu leeyahay iskutallaabta dhiigga Andalus iyo rubuc mayl.
Clydesdale sirdoonka, quruxda iyo mala-awaalka
Nooca fardaha loo yaqaan 'Clydesdale' wuxuu noo keenayaa is waafajin sheeko xariirro sheeko iyo mala awaal leh quruxdeeda iyo xarrago la yaab leh.
Nooc Noric: dabeecad iyo astaamo
Faraca caadiga ah, in kasta oo aan si fiican loo aqoon, wuxuu awood u leeyahay inuu ka yaabsado qof kasta oo amaahda ...
Faraska culus ee Breton
Faraskan culus ee loo yaqaan 'Breton', wuxuu u qalmaa sheekooyinka boqorro waaweyn, horayba waa loo riyaaqi karaa ...
Iyada oo leh magaca Mediterranean-ka, nooca loo yaqaan 'equine breed' ee loo yaqaan faraska qabyada ah ee Talyaaniga ayaa ka mid ah noocyada ...
Nooca Kabardin waa faras ku dayasho mudan, oo leh dhiig diiran oo lagu gartaa waxqabadkiisa weyn ee ...
Nooca Hackney wuxuu ku saabsan yahay faras dhiig diirran oo ujeedooyinkiisa ugu badan badanaa yihiin tartanka, ...
Faraska Noorweey ee Fjord waa nooc faras ah oo ka dhex muuqda dhaqamada labiska, ...
Ma taqaanaa faras faras gipsy ah? Raadi sababta loogu tixgeliyo faraska ugu doqonsan carruurta. Waxaan kuu sheegeynaa astaamihiisa, hab dhaqankiisa, asalkiisa iyo wax badan!
Daraasado badan ka dib waxaa la muujiyey in farasku ka mid yahay xayawaanka ugu caqliga badan dusha sare ee dhulka.
Dhaqanka wanaagsan ee faraska
Anaga daryeeleyaal ah ama maamuleyaal ah waxaa waajib nagu ah inaan faraska siino daryeel muhiim ah si aan u siino xaalad ladnaan iyo ...
3 halyeeyo fardo cad
Farduhu sidoo kale waxay leeyihiin halyeeyo muddo la ilaaliyay, gaar ahaan haddii aan ka hadalno ...
Faraska 'Trotter Faras' ama fardaha loo yaqaan 'koore', waa nooc ka soo jeeda Faransiiska oo si sax ah ...
Faraska dhabta ah ee Tarpan ama sida fiican loogu yaqaan faraska duurjoogta
Faraska Tarpan wuxuu dabar go'ay qarnigii XNUMX-aad, waana mid ka mid ah faracyadii ugu da'da weynaa ee jiray sidii faras duurjoog ah.
Asalka farasku wuxuu dib u noqon karaa 50 milyan oo sano. Kadibna waxay isbeddelaysay malaayiin sano, marwalba lafteeda ayaa is qurxinaysa.
Wadada loo yaqaan 'Anglo-Arab' oo lagu barto xirfado isboorti
Tartanka Anglo-Arab waxaa lagu gartaa adkaysigiisa, noloshiisa, awoodda dardargelinta iyo xawaaraha.
Shire breed: faras xoog badan oo adkaysi leh
Noocyada 'Shire' waa faras xoog badan oo adkaysi u leh inkasta oo aysan wax dhaqdhaqaaq ah lahayn haddana waxaa lagu magdhabaa xoogga weyn ee ay leeyihiin.
Faraska Mallorcan waa nooc caan ah oo caan ah oo loo yaqaan 'Mallorca' halka maanta, inkasta oo iskutallaabooyin kaladuwan, isirkeeda asalka ah la qadarin karo lana ilaalin karo.
Faraska carabta waa nooc millenari ah oo asal ahaan degenaa Carab waxaana fuulay reer baadiyaha.
Lucy Rees asal ahaan waxay ka timid Wales waxaana loo arkaa inay caan ku tahay adduunka faraska.
Da 'iyo jinsi markaad faras iibsaneyso
Marka aan iibsaneyno faras isla markaana markaan ogaanno nooca aan rabno, waa inaan tixgelin siino da'da iyo jinsiga faraska.
Astaamaha Faraska Carabta
Faraska Carabta waa mid ka mid ah noocyada ugu da'da weyn, oo leh xariiqyo dhiig oo ku jira noocyada casriga ah ee ugu da'da yar.
Qaab wanaagsan oo looga faa'iideysan karo faraskaagii hore ee kabo faras isla mar ahaantaana xusuus looga haysto isaga ayaa ah inaad iyaga siiso nolol cusub.
Waxaan wax yar kaaga sheegi doonaa nooca Breyer iyo fardahiisa, iyo sidoo kale fursadaha aad ku heli karto fardahooda Spain ama dalal kale.
Maqaalkani waxaan kuu sheegi doonnaa qaar ka mid ah astaamaha noocyada albino.
Faraskii Paso Fino ee Kolombiya
Talooyin Lagu Hagaagayo Daboolka Xayawaankaaga
Si aan ku filneyn, diiwaanka boodka wuxuu ka yimaadaa 1949 waxayna ku gaareen Chile, mararka qaarkood waqtiyada ...